Iyo iWork suite yeIOS inogadziridzwa nemabasa matsva | IPhone nhau
IWork suite yeIOS inogadziridzwa nezvitsva zvitsva
Vakomana vanobva kuCupertino vakatanga masikati ese ezuro, nguva yeSpanish, mabheji eIOS, watchOS uye tvOS, mabheji anongowanikwa kune vanogadzira. Asi yaisava yega software yakaburitswa nekambani, nekuti yakaburitsawo huru yekuvandudza yezvikumbiro zviri chikamu chehofisi suite, zvese zveIOS neMacOS. Idzi nyowani nyowani ivo vanotipa isu ingangoita nhau dzakafanana mune ese ari maviri masisitimu anoshanda, nhau dzatinonyora pazasi.
1 Chii chitsva mushanduro 3.2 yeMapeji eIOS
2 Chii chitsva mushanduro 3.2 yeNhamba yeIOS
3 Chii chitsva muKeynote vhezheni 3.2 yeIOS
Chii chitsva mushanduro 3.2 yeMapeji eIOS
Nekuburitswa kweichi chitsva, vashandisi veMapeji vanogona kusimudzira zvinyorwa zvavo neraibhurari inopfuura mazana mashanu manhamba akagadzirwa nehunyanzvi. Tinogona zvakare kupindura kumakomendi uye kutora chikamu takananga mukukurukurirana tambo, wedzera zvakabatanidzwa zvinyorwa zvemabhokisi kuti rugwaro rwufambe nyore nyore. Kufambisa pakati pemashiti magwaro iko zvino kuri nekukurumidza nekuda kwekuratidzwa kwemapeji emapeji. Chimwe chinhu chitsva chakakosha chinowanikwa mune mukana wekutumira kune ePub fomati, kugadzira mabhuku eBooks.
Chii chitsva mushanduro 3.2 yeNhamba yeIOS
Kunge iyo 3.2 vhezheni yeMapeji, ino nyowani nyowani inowedzera anopfuura mazana mashanu maumbirwo akagadzirwa zvine hunyanzvi pamwe nekutibvumidza isu kupindura uye kutora chikamu mune tambo dzekutaurirana mumagwaro ekubatirana. Kutenda kune idzva auto-kururamisa uye zvinyorwa kutsiva sarudzo, yakawanda nguva inochengetwa paunenge uchigadzira zvinyorwa. Kuti upedze nenhau, iyo Insert quote basa rinotiratidza iyo yekupedzisira kukosha yakanyoreswa panoperera musika zuva rapfuura.
Chii chitsva muKeynote vhezheni 3.2 yeIOS
Keynote ichatibvumidzawo kushandisa anopfuura mazana mashanu maumbirwo ehunyanzvi akaverengerwa mune ino gadziriso, pamwe nekutibvumidza isu kugadzirisa patsva masiraidhi uye kugadzirisa zvinyorwa zvemuratidziri tichiratidzira. Izvo zvinotibvumidzawo isu kupindura kune zvakataurwa uye kutora chikamu munhaurwa hurukuro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IWork suite yeIOS inogadziridzwa nezvitsva zvitsva
CareKit inobatsira mukutarisa nekutarisira kwevana vane zvakakosha zvekurapa zvinodiwa
Apple inoburitsa yechitatu beta yeIOS 10.3.3, watchOS 3.2.3 uye tvOS 10.2.2